I-iPhone X ngoku inokuthengwa simahla ngaphandle kwe-SIM e-US | IPhone iindaba
UJordi Gimenez | | iPhone X
Kwaye e-United States ngekhe uthenge izixhobo njengoko sisenza apha eYurophu, simahla. Kuyinyani ukuba abanye abaqhubi bavumela abantu ukuba batshintshe i-SIM yenye yeenkampani ezikhuphisanayo, kodwa kwiimeko ezininzi i-AT & T kunye nabanye abasebenzisi abayivumeli.
Ukusukela namhlanje, i-iPhone X iyafumaneka kwiivenkile zakwa-Apple ezineSIM yasimahla kwaye ivulwe ngqo yi-Apple, njengoko ii-iPhones zihlala zithengiswa ngaphandle kwe-United States. Ezi iPhone X zikwimeko eyahlukileyo kuleyo ye-Apple ese-US, ke bonke abo basebenzisi abafuna ukuthenga ezi iPhones zasimahla banokwenza njalo ukusukela ngoku.
Ngokumalunga namaxesha okuhanjiswa kwezi zixhobo zasimahla, sinokuthi ziyafana kakhulu nezo zifunyenwe ngokuthengwa kwe-iPhone ngenkxaso mali yomqhubi, Ixesha elibekiweyo ngoDisemba 12 kwabo bazithengayo namhlanje, ke sinesitokhwe esikhulu esikhulu se-iPhones.
I-iPhone X engavulwanga lukhetho olunomdla kubasebenzisi abafuna ukuswitsha phakathi kwabaqhubi ngaphandle kokubopha komnye wabo iminyaka emibini, ikwavumela ukhetho lokongeza amakhadi avela kwamanye amazwe, into engathandabuzekiyo enomdla kakhulu kwabo bahlala behamba rhoqo. Le yinto esinayo eSpain okoko kwafika i-iPhone 4Kuba ngaphambili umqhubi kuphela owayethengisa ii-iPhones yayinguMovistar.
I-iPhone X eneSIM yasimahla kwaye ayivulwanga iqala kwi $ 999 (ngaphandle kweerhafu) kwimodeli yokugcina engama-64 GB kunye inyukela kwi- $ 1.149 (ngaphandle kwetax) yemodeli yokugcina eyi-256GB.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone X » I-iPhone X ngoku inokuthengwa simahla ngaphandle kwe-SIM e-US
Ziindaba ezimnandi kakhulu ukuba ungazifumana.
Le nto uyithethayo ayisiyonyani ngokupheleleyo.
IVerizon ithengisa i-terminal ihlala isimahla.
Abasebenzisi abanjenge-AT & T kunye ne-T-Mobile banikezela nge-iPhone simahla ukuba uthenga "ngentlawulo epheleleyo" kwiVenkile yeApple, oko kukuthi, ukuba awuyixhasi ngezimali ngokusekelwe kwikhontrakthi yomqhubi.
Andithethi kwanto ngeSprint, kuba andiqinisekanga.
E-United States, ii-iPhones zokuqala zithengiswa ngokudibana nezivumelwano zomqhubi. Kuphela kusemva kweeveki ezimbalwa apho banokuthengwa ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwesivumelwano kunye nawuphi na umsebenzisi. Yile nto inqaku libhekisa kuyo.
Ihlobo laseAsia sitsho
Ngaba uyazi ukuba ingakanani irhafu enokuthi ibe yi-approx?
Phendula ihlobo laseAsia
Kuxhomekeka kwimeko oyithengayo, kodwa ihamba phakathi kwe-8 ne-14%.
Ke ixabiso liyafana nalapha ukuba ukongeza ukuhambisa